ग्यास्ट्रिकको औषधीमा देखिएको अशुद्धताले क्यान्सर उत्पन्न गराउने सम्भावना – Khabar Silo
ग्यास्ट्रिकको औषधीमा देखिएको अशुद्धताले क्यान्सर उत्पन्न गराउने सम्भावना
काठमाडौं । औषधि वयवस्था विभाग (डीडीए)ले उत्पादन र पैठारीकर्तालाई ग्यास्ट्रिकमा उपयोग गरिने ‘रेनिटिडिन’ औषधिमा हालै देखिएको अशुद्धताले क्यान्सर उत्पन्न गराउने सम्भावना देखिएको जनाउँदै विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
किन हुन्छ ग्यास्ट्रिक? यस्ता छन् कारण र जोगिने उपाय
डा. रूपेन्द्र पुरी, आयुर्वेद चिकित्सक जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बनेपा । सामान्यतया पेटमा एक किसिमको एसिड उत्पादन हुन्छ । जसले खाना पचाउनेदेखि लिएर खानासँगै पेटमा गएका ब्याक्टेरिया मार्ने गर्छ । यदि पेटमा अम्ल उत्पादन बढी भएमा तन्तु जलाउने हुन्छ, जसलाई सामान्य भाषामा ग्यास्ट्रिक भनिन्छ ।
ग्यासट्राइटिस भएमा पेट फुल्ने वा भरिएको अनुभव हुने, खाना राम्रोसँग नपच्ने, लामो समयसम्म खाना नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहने समस्या देखिन्छ । यसले पाचन प्रकियालाई बाधा पुर्याउने गर्छ । जसले शरीरमा रगत र क्याल्सियमको कमी गराउँछ र अल्सर हुँदै क्यान्सरसम्म निम्त्याउन सक्छ ।
–ग्यासट्राइटिस हुनुको प्रमुख कारण खानपानमा गडबडी नै हो । जे पायो त्यही खाने, कतिवेला धेरै खाने वा खाना नै नखाने, बढी मसालेदार खाना खाने गर्नाले ग्यास्ट्राइटिस हुने गर्छ ।
–धेरै तारेको खानेकुरा खाने गर्नाले पनि ग्यास्ट्राइटिस हुने सम्भावना बढी हुन्छ । फास्टफुड र जंकफुडको अत्यधिक सेवनबाट समेत ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ ।
–दीर्घरोगमा सेवन गरिने कतिपय औषधि ग्यास्ट्रिकको कारक हुन सक्छ । खासगरी पेनकिलर बढी खाएमा ग्यास्ट्रिक हुन्छ ।
–सुर्तीजन्य पदार्थ, ड्रग्स र अल्कोहलका कारण ग्यास्ट्रिक हुन्छ । कहिलेकाहीँ तनावका कारणसमेत यस्तो समस्या देखिन्छ । पेटमा भएको क्यान्सर र खाद्यनलीको क्यान्सरले ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ ।
–आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट ग्यास्ट्रिकको उपचार दुई तरिकाले गरिन्छ, औषधि प्रयोग गरेर र औषधिको प्रयोगविना गरिने उपचार ।
–खासगरी पेटमा बढेको अम्ललाई शान्त पार्नका लागि विभिन्न किसिमका औषधि प्रयोगमा ल्याइन्छन् । यदि ग्यास्ट्रिक भएको लामो समय भएमा औषधिका साथै बिरेचन र बमन विधिको प्रयोग गरिन्छ । जुन ग्यास्ट्रिकको अवस्था हेरेर बान्ता गराउने र पेट सफा गर्ने गरिन्छ ।
–बिरेचन र बमन पञ्चकर्मअन्तर्गत पर्ने उपचार पद्धति हुन् । यस्ता विभिन्न उपचार विधिको प्रयोगले झन्डै एक महिनामा ग्यास्ट्रिक पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ ।
–आयुर्वेदमा खानपान र जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर उपचार गरिन्छ । खानपानमा ध्यान दिन सकेमा ग्यास्ट्रिक सजिलै निको पार्न सकिन्छ ।
–उपचारको समयमा पनि धेरै चिल्लो, अमिलो, पिरो, तारेको खानेकुरा खानुहुँदैन । व्यायाम गर्ने, तनाव नलिने, आहार–विहारमा ख्याल गरेमा ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ । याे जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएकाे हाे ।
मुटुकाे चिन्ता छ भने बिदाकाे दिन नसुत्नुस् धेरै !
एजेन्सी– आवश्यकताभन्दा धेरै निदाउँदा मुटुमा समस्या बढ्न सक्ने एक अध्ययन देखाएको छ । चीनको म्याकमास्टर एन्ड पिकिङ युनियन मेडिकल कलेजमा भएको एक रिसर्चले धेरै निदाउने मानिसहरुमा मुटु रोगको खतरा बढ्ने बताएको छ । अनुसन्धानमा २१ देशका ११,७०० मानिसहरु सहभागी थिए । जसको उमेर ३५ देखि ७० वर्षको बीचमा थियो । यो अनुसन्धान ८ वर्षसम्म चलेको […]
चोटका कारण पोग्बा र डी गियाले लिभरपुलसँगको खेल गुमाउने!